လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့် | ဟန်ဆန်း
သတင်းအတုဝက်ဘ်ဆိုဒ်များပေါ်တွင် လွှင့်တင်ထားသောသတင်းများသည် သတင်းအပေါ်အခြေခံထားသည့် သရောစာများနှင့်လုံးဝမတူညီပါဘဲ အခြေအနေမှန် အဖြစ်အပျက်မှန်ကို အထင်အမြင်လွှဲမှားစေရန် တမင်္ဂလာပုံစံဖျက်၍ လွှင့်တင်ထားသောသတင်းများသာဖြစ်ပါသည်။
October 27, 2017 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်, ဝေါဟာရ.
အိုင်စီတီနည်းပညာနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းယဉ်ကျေးမှုကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရရှိလာသော ရလာဒ်မှာ အွန်လိုင်းပေါ်မှ သတင်းအတု(Fake News)များ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသတင်းအတုများသည် အိုင်စီတီနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းတို့ကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာ ကြခြင်း သက်သက်မဟုတ်ပါ။
October 12, 2017 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်.
‘‘အချစ်မှာ ‌ယောင်္ကျား မိန်းမ Tomboy Shemale ဆိုတာ ရှိလား’’ ဆို‌သောစကားရပ်သည် ခုနှစ်ကြိမ်‌မြောက် ဝဿန်ရုပ်ရှင်ပွဲ‌တော်တွင် ပြသခွင့်ရရှိခဲ့‌သော အချစ်ဇာတ်လမ်းရိုးရိုး‌လေးတစ်ပုဒ်(A Simple Love Story)မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၏ အပိတ်စကားရပ်ဖြစ်သည်။
September 19, 2017 in ဆောင်းပါး, လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်.
သတင်းမှားခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်မှားယွင်းခြင်းနှင့် မှန်ကန်‌သောသတင်းအချက်အလက်မရရှိခြင်းတို့သည် ယ‌နေ့ကာလတွင် ရင်ဆိုင်ကြုံ‌တွေ့‌နေရ‌သော ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
August 23, 2017 in ဆောင်းပါး, လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်, ဝေါဟာရ.
‘တိုင်ကြားနိုင်သည်’ စကားရပ်ဖြင့် အနိုင်ယူခြင်းခံလိုက်ရသည့် စာနယ်ဇင်းကောင်စီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအား ကြားဖြတ်အစိုးရအဖြစ်တင်မြှောက်ကြောင်း ဒီမိုကရေစီအရေး စဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုအင်အားစု(MCDF)၏
October 26, 2014 in စာပေဆောင်းပါး, ဆောင်းပါး, လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်.
ဒီမိုကရေစီကို တိတ်ဆိတ်မှုဖြင့် သုတ်သင်နေသော်လည်း လွတ်လပ်သောအသံများက ကျယ်လောင်စွာပြောဆိုနေမည်
ကမ္ဘာ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အဖြစ် မေလ ၃ ရက်နေ့ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်က စတင်၍ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်၏
May 1, 2014 in စာပေဆောင်းပါး, ဆောင်းပါး, လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်.
စုန်၍ ဆန်၍ရသော ရသ၊ စုန်၍ ဆန်၍လှသော စာပေ
PEN Myanmar အဖွဲ့နှင့်အတူ ရသအစုန်အဆန် ရေးသူဖတ်သူ ဆွေးနွေးပွဲ မုံရွာ-ရွှေဘိုခရီးစဉ်ကို လိုက်ပါခဲ့သည်။ ထိုခရီးစဉ်သည် ဝမ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်ရသော ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းခြင်းက တစ်ဖက်၊ ဝမ်းသာ ကြည်နှုးခြင်းက တစ်ဖက်ဖြင့် သွားခဲ့ရသော ခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
May 1, 2014 in စာပေဆောင်းပါး, စာပေအတွေး, ဆောင်းပါး, လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်.